Amagqwetha okuThobela amazwe e-Netherlands - Law & More
Kuluntu lwanamhlanje, ukubaluleka kokuthotyelwa kubaluleke ngakumbi. Ukuthobela kuthathwe kwisenzi sesiNgesi 'ukuthobela' kwaye kuthetha 'ukuthobela okanye ukuhlala'. Ngokombono wezomthetho, ukuthotyelwa kuthetha ukuthobela imithetho nemigaqo esebenzayo. Oku kubaluleke kakhulu kuyo yonke inkampani nakwiziko. Ukuba imithetho nemigaqo esebenzayo ayilandelwa, amanyathelo anokumiselwa ngurhulumente.
Kuluntu lwanamhlanje, ukubaluleka kokuthotyelwa kubaluleke ngakumbi. Ukuthobela kuthathwe kwisenzi sesiNgesi 'ukuthobela' kwaye kuthetha 'ukuthobela okanye ukuhlala'. Ngokombono wezomthetho, ukuthotyelwa kuthetha ukuthobela imithetho nemigaqo esebenzayo. Oku kubaluleke kakhulu kuyo yonke inkampani nakwiziko. Ukuba imithetho nemigaqo esebenzayo ayilandelwa, amanyathelo anokumiselwa ngurhulumente. Oku kwahluka kwintlawulo yolawulo okanye intlawulo yesohlwayo ekurhoxisweni kwelayisensi okanye ekuqalisweni kophando lolwaphulo-mthetho. Nangona ukuthotyelwa kunokuhambelana nayo yonke imithetho ekhoyo kunye nemimiselo, kule minyaka idlulileyo ukuthobela kudlale indima enkulu kumthetho wezemali nakumthetho wabucala.
Idatha yobuqu ibhekisa kulo naluphi na ulwazi olunxulumene nomntu ochongiweyo okanye ochongiweyo wendalo. Oku kuthetha ukuba olu lwazi luhambelana ngqo nomntu okanye lunokufunyanwa ngqo kuloo mntu. Phantse wonke umbutho kufuneka ujongane nokulungiswa kwedatha yobuqu. Sele injalo imeko, umzekelo, xa kuqhutywa ulawulo lwemivuzo okanye xa kugcinwa idatha yomthengi. Kungenxa yokuba ukwenziwa kwedatha yobuqu kukhathaza abathengi kunye nabasebenzi benkampani. Kwakhona, uxanduva lokuthobela i-GDPR lusebenza kwiinkampani nakumaziko ezentlalo afana neeklabhu zemidlalo okanye iziseko.